Global Voices teny Malagasy » Ny sandan’ny fanoherana: Ny vehivavy sy ny fikatrohana pôlitika ao Vietnam · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 16 Mey 2021 5:53 GMT 1	 · Mpanoratra The 88 Project Nandika Sylvia Aimée
Sokajy: Azia Atsinanana, Vietnam, Fahalalahàna miteny, Fanoherana, Fitantanam-pitondrana, Hafanàm-po nomerika, Mediam-bahoaka, Politika, Vehivavy sy Miralenta, Zon'olombelona, Ny Tetezana - The Bridge
Ankavia miankavanana: ilay mpikatroka sady mpanao gazety, Pham Doan Trang, ilay mpikatroka sady mpiaro tontolo iainana, Dinh Thi Thu Thuy, ary ilay mpikatroka sady mpiangaly mozika, Mai Khoi
Ity lahatsoratra  ity dia nivoaka voalohany tao amin'ny The 88 Project, tranonkalam-baovao iray tsy miankina izay mandrakotra ny ao Vietnam, ary dika iray nokiraina no averin'ny Global Voices avoaka etoana ao anatin'ny fifanarahana mifampizara votoaty.
Tamin'ny 20 Janoary, i Dinh Thi Thu Thuy  no lasa vehivavy farany indrindra amin'ireo mpikatroka nahazo fanamelohana hifonja ao Vietnam. Tao amin'ny Facebook, Thuy, injeniera momba ny fambolena sady mpikatroka mpiaro tontolo iainana avy ao Mekong Delta, dia nanakiana andiana pôlitikam-panjakana ary nosamborina tamin'ny Aprily 2020. Resaka lahatsoratra dimy monja izay tsy nahazo afa-tsy Tia miisa 130, ary naverina nozaraina in-80, no nahazoan'i Thuy sazy fito taona an-tranomaizina. Talohan'ny fitsaràna azy, izay naharitra ora efatra, efa nifonja valo volana i Thuy talohan'ny fitsaràna, tsy afaka nifandray tamin'ny fianakaviana, isan'izany ny zanany lahikely 10 taona. Henjana ny fiainana any am-ponja. Vokatry ny fepetra tsizarizary any amin'ireo toerana famonjàna, nisy fahavoazana tany amin'ny fon'i Thuy ary naiditra hôpitaly izy. Thuy no iray amin'ireo Vietnamiàna vehivavy manam-pahasahiana nanefa be vokatry ny fanehoan'izy ireo ny heviny fotsiny.
Amin'izao fotoana izao, 241 ireo Vietnamiàna mpikatroka, lahy sy vavy, no migadra. Iray amin'ireo mpikatroka vehivavy miisa 21 manefa sazy any am-ponja i Thuy, raha mbola misy kosa enina hafa miandry ny fitsaràna azy ireo. Ho takalon'ny famotsorana mialohan'ny fotoana, vehivavy telo no nandao ny firenena ary miaina an-tsesitany. Mbola misy 55 eo raha kely indrindra ireo vehivavy mety mbola hiharan'ny fanenjehana raha ny tombana nataon'ny The 88 Project. Na marobe aza ireo lehilahy mpikatroka raha ampitahaina amin'ny vehivavy, tena ilaina ny manamarika fa, amin'ireo endrika fantadazan'ny fanoherana ao Vietnam, betsaka no vehivavy. Ilay bilaogera Nguyen Ngoc Nhu Quynh , fantatra ihany koa any Andrefana amin'ny anarana hoe “Mother Mushroom,” dia nahasarika ny sain'izao tontolo izao tamin'ny 2017 taorian'ny nanoloran'ny Departemanta Amerikàna azy ny loka ho an'ny Vehivavy Feno Fahasahiana Erantany (International Woman of Courage) taorian'ny nisamborana azy herintaona talohan'izay. Nosamborina i Quynh noho ireo zavatra nosoratany tety anaty tambajotra, izay nisarika ny saina handinika ireo herisetra ataon'ny pôlisy, ny kolikoly ary ny loza voajanahary nateraky ny Fromosa tamin'ny 2016 . Sazy an-tranomaizina 10 taona no azon'i Quynh tamin'ny 2017, saingy navotsotra izy herintaona taorian'io ary nandeha nanao sesitany ny tenany tany Etazonia.
Mai Khoi,  mpihira malaza, dia nampiasa ny sehatra tantaniny ho toy ny iray amin'ireo malaza amin'ny mozika ao Vietnam ho entina mampiroborobo ny zon'ireo LGBT, ny fiarovana ny vehivavy, ary ny fahalalahana miteny. Ny taona 2010 i Khoi no lasa nalaza be rehefa nahazo ny laharana volohany tamin'ny Hira sy ny Rakikiran'ny Taona tao amin'ny televiziona vietnamiàna, saingy lasa nihakivy hatrany hatrany izy noho ny tsy fisian'ny fahalalahana ho an'ireo mpanakanto sy ny fahalalahana pôlitika ao amin'ny firenena. Tamin'ny 2016, nandramany, saingy tsy lany izy, ny nirotsaka ho kandidà tsy miankina ho ao amin'ny Antenimieram-Pirenena. Nihaona tamin'i Barack Obama nandritra ny fitsidihany tao amin'ny firenena tamin'io taona io i Mai Khoi mba hiresaka momba ny zon'olombelona ao Vietnam. Nanaitra ireo manampahefana ny fomba fiteniny tsy miahotra, ary dia notànana nandritra ny ora valo tao amin'ny seranampiaramanidina tao Hanoi izy rehefa niverina avy nanatontosa fitetezana an'i Eorôpa tamin'ny 2018. Ny 2019, nisy fanadihadiana iraisampirenena nivoaka momba an'i Mai Khoi. Taorian'ireo filàmbaniny tsy mitsahatra dia any Etazonia izy izao no mipetraka.
Ao Vietnam, mbola ny lehilahy no manjaka amin'ny sehatra pôlitika. Iray monja amin'ireo 18 mpikambana ao amin'ny Politburo  no vehivavy. Amin'ireo 200 mpikambana ao, 19 monja no vehivavy ao anatin'ny Komity Foibe (CC). Mba somary mahazo vàhana ny vehivavy ao amin'ny Antenimieram-Pirenena, saingy ny tena fahefana pôlitika dia eo an-tànan'ny Politburo sy ny CC. Tamin'ny 2019, nilaza  tamin'ny The 88 Project ilay mpikatroka sady mpanao gazety, Pham Doan Trang, fa ny fikatrohana pôlitika dia tsy hoe fotsiny tolona hanoherana ny jadona, fa koa tolona hanoherana ireo fetra apetraky ny fiarahamonina fehezin-dehilahy ao Vietnam.
“Tsy hoe mizaka ny ataon'ny fitondrana fotsiny ireo vehivavy raha resaka pôlitika, fa koa mizaka ny tsy fitovian'ny lahy sy ny vavy, ny famerana ataon'ny tenany ihany” hoy izy nanazava. “Mametra ny tenany ireo vehivavy amin'ny fisainana hoe tsy natao hitàna toerana pôlitika ry zareo, fa natao ho an'ny lehilahy ny pôlitika … Araka izany, tokony hihevitra isika fa ny tolona ataontsika dia tsy hanoherana fotsiny ny jadona, na mba hanafahana an'i Vietnam hiala amin'ny jadona. Fa koa tolona iray hanafahantsika ny tenantsika hiala amin'ireo teritery ara-potokevitra ananantsika, hiala amin'ireo fitsaratsaram-poana izay isika ihany no mametraka azy ho antsika.
Tamin'ny Oktobra 2020 i Pham Doan Trang no nosamborina,  rehefa nilàna vaniny nandritra ny taona maro ary amin'izao fotoana izao dia miandry ny fitsaràna azy. Heloka itazonana azy ny “fampielezankevitra hanoherana ny fanjakàna” araka ny voalazan'ny Andininy faha 117 ao amin'ny Lalàna Famaizana tamin'ny 2015. Matetika ampisaina ny Andininy faha 117 ho entina mampiditra am-ponja ireo mpikatroka manakiana ny fitondràna.
Vao mainka mampiavaka bebe kokoa ny fandraisana anjaran'ireo vehivavy mpikatroka ny tsy fahampian'ny isan”ireo vehivavy any anatin'ny sehatra avon'ny pôlitika ao Vietnam. Mazava loatra, lehilahy ny ankamaroan'ireo mpikatroka ao Vietnam, saingy io no vao mainka mampivoitra bebe kokoa ny fiantraikan'ny asan'ireo vehivavy. Ireo vehivavy toa an'i Nguyen Ngoc Nhu Quynh, Pham Doan Trang, ary Mai Khoi no nisarika ny sain'izao tontolo izao hijery ny resaka zon'olombelona ao Vietnam.
Mazava loatra, tsy ny vehivavy rehetra no hahatratra fankatoavana iraisampirenena tahàka izany noho ny fandraisan'izy ireny anjara. Izany indrindra anefa no tian'ny Antoko Kaomlinista (VCP) hahatongavana. Na dia arovan'ny Lalàm-panorenana aza ny fahalalahana maneho hevitra, tsy leferina mihitsy ny fanakianana fitondràna. Firenena dimy monja eto an-tany no manana fahalalahan'ny asa fanaovana gazety ambany kely fotsiny noho ny an'i Vietnam araka ny  lazain'ny RSF (Mpitatitra Vaovao Tsy Voafehin-tSisintany). Na Iràna sy Arabia Saodita aza mbola manana gazety malalaka kokoa. Taorian'ny Kaongresy faha-13 nataon'ny antoko tamin'ny volana lasa, tsy dia azo antenaina loatra ny hiovàn'izany ato anatin'ny fotoana fohy.
Fanapahankevitra tsy mahazatra no noraisin'ny CC tamin'ny nifidianany indray ny sekretera jeneraly efa teo, Nguyen Phu Trong. Mpifikitra hiringiriny amin'ny nentindrazana i Trong ary nanara-maso ny fitomboan'ny famoretana, indrindra fa nandritra ny fepotoana voalohany nahatafaverina azy tamin'ny 2016. Herinandro vitsy monja talohan'ny nanombohan'ny Kaongresy, mpikambana (lahy) telo avy amin'ny Mpanao Gazety Tsy Miankina ao Vientam no nahazo sazy fampidirana am-ponja 11 ka hatramin'ny 15 taona noho ny asan-dry zareo. Toa an'i Pham Doan Trang, heloka anenjehana azy ireo ny “fampielezankevitra hanoherana ny fanjakàna.”
Tamin'ny Aprily 2020, noteren'i  Vietnam ny Facebook mba hanivana sy hamafa ireo votoaty tsy mankasitraka ny VCP. Mety ho setrin'ny fandraisana anjaran'ireo mpikatroka toa an'i Dinh Thi Thu Thuy, izay nampiasa io sehatra io hanakianana ny pôlitikan'ny fanjakàna. Tsy isalasalàna fa matahotra ny fiantraikan'ny media sôsialy ny VCP.
Ireo hetsika misy amin'izao fotoana izao any Myanmar dia vavolombelon'ny tanjaky ny media sôsialy amin'ny fampivondronana sy ny fikarakaràna hetsipanoherana pôlitika. Toa tsy azo inoana loatra ho hita ato ho ato any Vietnam anefa ireo hetsipanoherana any Myanmar. Farafaharatsiny ato anatin'ny fotoana fohy, azo vinaniana kely ihany ny hoavy ao Vietnam. Hitohy hanivana ny fahalalahan maneho hevitra ny fanjakàna ary hampiditra am-ponja ireo mpanohitra. Hanohy hijoro hanohitra azy ireo kosa ireo mpikatroka vehivavy ao Vietnam.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2021/05/16/152105/
 Dinh Thi Thu Thuy: https://the88project.org/profile/481/dinh-thi-thu-thuy/
 Nguyen Ngoc Nhu Quynh: https://the88project.org/profile/2/nguyen-ngoc-nhu-quynh/
 loza voajanahary nateraky ny Fromosa tamin'ny 2016: https://en.wikipedia.org/wiki/2016_Vietnam_marine_life_disaster
 Mai Khoi,: https://the88project.org/profile/330/do-nguyen-mai-khoi/
 no nosamborina,: https://the88project.org/profile/286/pham-doan-trang/
 araka ny: https://rsf.org/en/ranking